Home Wararka Dayax Gacmeedka habowga ah ee Shiinaha oo la filayo in uu ku...
Dayax Gacmeedka habowga ah ee Shiinaha oo la filayo in uu ku soo dhaco dhulka
Gantaalkii weynaa ee Shiinaha ee faraha ka baxay ayaa la filayaa inuu dhammaadka isbuucan ku soo dhaco dhulka, wuxuuna toddobaadkan sababay cabsi wayn.
Hay’adda Cirbixiyeennada Mareykanka ayaa isku deyeysa in ay ka hortagto halista uu geysan karo, balse lama oga halka uu ku wajahan yahay.
1- Goormaa la filayaa in gantaalka Shiinaha uu dhulka soo gaaro?
“Lama xaqiijin karo meesha uu dhulka kaga dhici doonta, ilaa laga gaaro saacadaha ugu dambeeya, sabatoo ah xawaaraha uu ku socdo gantaalka ayaa aad u sarreeya,” ayuu yidhi Haward, balse waxaa la soo saari doonaa macluumaad maalinle ah oo la xiriirta halka uu soo marayo gantaalka.
2- Maxaa dhacaya Haddii Gantaalka uu dhulka soo gaaro?
Gantaalka oo dhererkiisu yahay 30 mitir ayaa haatan dunida ku dul wareegaya, 90 daqiiqo kasta, xawaarahaas oo aad u sarreeya, sababayna inay khubarada cirbixiyeenada ku adkaato in ay shaaciyaan halka saxda ah ee uu ku dhacayo.
“Nasiib wanaag sidaa darteed khasaaraha dadka, dhismooyinka ama deegaanka soo gaaraya aad buu u yaraan doonaa.”
3- Gantaalladii horay dhulka ugu soo dhacay
Bishii Maarso gantaal lagu magacaabo Falcon-9 oo uu Mareykanka hawada u diray ayaa ku soo dhacay dhulka, gaar ahaan Washington iyo xeebta Oregon.